Usuku My Pet » Ingabe Ukudla Yenza Every Student Relationship Better?
Igcine ukubuyekezwa: Dec. 03 2020 | 2 imiz ufunde
Emuva emuva ekilasini lesayensi esikoleni somphakathi, uma wafunda izidingo ebalulekile yokuphila.
Amakhanda ethu agcwala ulwazi mayelana nendlela thina njengabantu zidinga supply njalo air, amanzi kanye nokudla ukusinda. Sure, air namanzi ibalulekile, kodwa eziningi uhlobo yami imfuneko ebalulekile omunye ukuthi umi ngempela out is ukudla. Kungenzeka ukuthi mina 18 ngonyaka male ubudala ngezinye izikhathi ucabanga uthando lwakhe main njengoba yokudla, kodwa endaweni umfundi ukudla lisiphatheleni amandla amakhulukazi.
Ukudla kusenza sicebe in ukugcwaliseka kodwa imali waphula, ukudla kuletha abangane ndawonye, Ukudla kuyimbangela for celebration nsuku zonke futhi angenza noma isiphi ubuhlobo umfundi kangcono.
Ake ngichaze ...
Angisona isazi-mlando esidumile kodwa ngiyaqiniseka pretty isiqiniseko sokuthi kusukela ekuqaleni kwesikhathi, ubudlelwano Kuye lwashuba futhi iye yanda ngenxa ukudla.
Cavemen and cavewomen sasondelana phezu nice sokudla moon-izibani squirrel okugazingiwe namantongomane. The Viking era Yayinesikhwanyana isikhathi izinga phakathi abathandi kokuba kwabelwane ngesikhathi madili eqotho. Namuhla, ngisho ukuphuma usuku ikhofi cishe zihilela uhlobo oluthile lokudla. Uthola iphuzu.
In the kombuso umfundi, Ukudla usalokhu le isikhundla nokuvelela okuthé relations.
Pizza kungenzeka ezohlobo enemisebenzi kakhulu futhi ezinethonya ubuhlobo uMdali sonke isikhathi. Thukela ngeke intombazane uthi cha nice pizza date (ikakhulukazi uma nge fella nicer). ukushukuma komzimba Simple like ukuhleleka kuka e noma selula ukungcebeleka nice yedolobha endaweni pizza kuyokwenza noma ibuphi ubuhlobo ayachuma.
Konke nje wenza kanjalo lula kakhulu ukudla.
Noma ngabe usuku lwakho lokuqala noma usuku lwamashumi amabili, uma kuhilela ukudla wena nomaqondana wakho kokubili ukujabulela ke izingxoxo siyothola kangcono, smiles kuyoba licace, izisu yakho egcwele injabulo kanye cishe more uxhumano lwakho uyochuma.
Uma uhlala endlini isitofu ukusebenza, kuhhavini, into yokucocobalisa, microwave noma bafudumale isibani ke ungakwazi futhi iqhaza kule ekuqiniseni ubuhlobo. By ukupheka ukudla ndawonye, noma ematfuba ukulungiselela ukusabalala nice for ephawulekayo ezinye yakho kuyoba khona isikhathi fun and oyokusondeza ndawonye (ngisho noma amakhono akho ukupheka kukhona eceleni none ... KD namanje ukudla).
Lokhu kusiletha ekuphileni sokuhlala. Kukhona into enhle ukuthi bonke abafundi plan kokudla uzokuqonda. With a calandze elula plastic, one ungathola amanani esikhulu ukudla lokho kunjani a ngezindleko kancane kakhulu. Swipe, udle, futhi uma ingahlanganisa kalula isici romantic. Izinhlelo Iningi sidlo Lingase lisetshenziselwe lonke campus futhi ezinye zokudlela yedolobha. Lokhu kudala ukufinyelela kalula okokuzisekela ke indlela elula ukukhokhela futhi niqhubeke dates.
In the world of imfundo ephakeme, ukondleka angenza noma isiphi ubuhlobo student lula, kangcono, futhi nje ukuthi ezesabekayo okuningi. Bathi uthando akadingi isizathu ... kodwa isiqiniseko idinga ukudla.